Proximity Marketing: အဲဒါဘာလဲ။ ဘာအမျိုးအစားလဲ
ကျွန်ုပ်၏ဒေသခံ Kroger (စူပါမားကတ်) ကွင်းဆက်ထဲသို့ ၀ င်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုငုံ့ကြည့်လိုက်ပြီး Kroger Savings ဘားကုဒ်ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်မည်သည့်နေရာတွင်ပေါ်လာမည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်အက်ပ်ကိုဖွင့ ်၍ ရှာဖွေရန် အတန်းမှာ။ ငါ Verizon စတိုးသို့သွားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ app သည်ကျွန်ုပ်ကိုကားမထွက်မီ check-in လုပ်ရန်လင့်ခ်တစ်ခုဖြင့်သတိပေးသည်။
၎င်းသည်အသုံးပြုသူ၏အတွေ့အကြုံကို အခြေခံ၍ ကောင်းမွန်သောဥပမာနှစ်ခုဖြစ်သည် အချစ် အစပျိုးခြင်း။ အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်လူသိများသည် နီးကပ်စျေးကွက်.
၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၂.၄၆ ဘီလီယံအထိတိုးတက်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည် စျေးကွက်.
Proximity Marketing ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Proximity marketing ဆိုသည်မှာတည်နေရာနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏သယ်ဆောင်ရလွယ်သောစက်များမှတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်မည်သည့်စနစ်မဆို။ Proximity စျေးကွက်သည်ကြော်ငြာကမ်းလှမ်းမှုများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်လက်ကိုင်ဖုန်းအသုံးပြုသူနှင့်သူတို့နီးကပ်သောနေရာတွင်တည်ရှိနေသောအခြားဆက်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများပါဝင်သည်။
ချဉ်းကပ်မှုစျေးကွက်၏အသုံးပြုမှုများတွင်ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ သတင်းများ၊ ဂိမ်းများနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအသုံးချမှုများ၊ လက်လီအရောင်းပြခန်းများ၊ ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်များနှင့်ဒေသဆိုင်ရာကြော်ငြာများတွင်မီဒီယာဖြန့်ဝေခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
Proximity marketing သည်နည်းပညာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ၊ အမှန်တကယ်တွင်မတူညီသောနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်မထားပါ။ ဂျီပီအက်စ်ဖွင့်ထားသောခေတ်သစ်လက်ပ်တော့ပ်များသည်အချို့သောနီးကပ်သည့်နည်းပညာများမှတစ်ဆင့်ပစ်မှတ်ထားခံရနိုင်သည်။
NFC ကို - ဖုန်း၏တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည် အနီးအနားရှိဆက်သွယ်ရေး (NFC) ထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့မဟုတ်မီဒီယာတစ်ခုမှ RFID ချစ်ပ်နှင့်ဆက်သွယ်သည့်ဖုန်းတွင်ဖွင့်ထားသည်။ NFC သည် Apple Pay နှင့်အခြားငွေပေးချေသည့်နည်းပညာများအတွက်အသုံးပြုသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ငွေပေးချေမှုကိုကန့်သတ်စရာမလိုပါ။ ပြတိုက်များနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများသည်ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက်ပေးရန် NFC ကိရိယာများကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်အတွက် NFC ကိုစင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ NFC နည်းပညာဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။
Geofencing - သင်သည်သင်၏ဖုန်းနှင့်အတူရွေ့လျားသကဲ့သို့, သင်၏ဆယ်လူလာဆက်သွယ်မှုတာဝါတိုင်များအကြားစီမံခန့်ခွဲ။ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစနစ်များသည်သင်၏တည်နေရာကိုအသုံးချပြီးတိကျသောဒေသတစ်ခုအတွင်းရှိစက်ပစ္စည်းများကိုသာမက်ဆေ့ခ်ျပို့နိုင်သည်။ ၎င်းကိုလူသိများသည် SMS Geofencing။ ၎င်းသည်တိကျသောနည်းပညာမဟုတ်သော်လည်းသင်၏စာကိုသင်လိုချင်သည့်အချိန်တွင်သင်လိုအပ်သည့်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်ထံသာပေးပို့ရန်သေချာသည်။
ဘလူးတုသ် - လက်လီရောင်းဝယ်မှုနေရာများကိုအသုံးချနိုင်သည် beacons သင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်နည်းပညာနှင့်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံနိုင်သောမိုဘိုင်း application တစ်ခုရှိသည်။ သင်သည်အကြောင်းအရာများကို Bluetooth မှတဆင့်တွန်းပို့နိုင်သည်၊ WiFi မှဒေသတွင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအမှတ်အဖြစ် Beacon ကိုသုံးနိုင်သည်၊ Captive ပေါ်တယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပဲလည်ပတ်နိုင်သည်။
RFID - အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်လူကိုခွဲခြားရန်ရေဒီယိုလှိုင်းများကိုသုံးသောနည်းပညာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ RFID သည်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး ကိုသတ်မှတ်သည့်ကိရိယာတွင်အမှတ်စဉ်နံပါတ်သိုလှောင်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒီအချက်အလက်ကိုအင်တာနာနဲ့ကပ်ထားတဲ့မိုက်ခရိုချစ်ပ်ထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်။ ဒါကို RFID tag လို့ခေါ်တယ်။ အဆိုပါချစ်ပ်သည် ID အချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူထံပို့ပေးသည်။
Proximity ID - ၎င်းတို့သည် Proximity ကဒ်များသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်မရှိသော ID ကတ်များဖြစ်သည်။ ဒီကဒ်များသည်လက်မအနည်းငယ်အတွင်းဝေးလံခေါင်သီသောလက်ခံသူနှင့်ဆက်သွယ်ရန် embedded antenna ကိုအသုံးပြုသည်။ Proximity ကဒ်များသည်ဖတ်ရန်အတွက်သာကိရိယာများဖြစ်ပြီးတံခါးကို ၀ င်ရောက်ရန်လုံခြုံရေးကဒ်များအဖြစ်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ဤကတ်များသည်သတင်းအချက်အလက်အကန့်အသတ်နှင့်သာရှိနိုင်သည်။
ဤပလက်ဖောင်းများကိုတီထွင်လိုသောကုမ္ပဏီများသည်မိုဘိုင်းကိရိယာ၏ပထဝီအနေအထားနှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမိုဘိုင်း application များကိုအသုံးပြုကြသည်။ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်ပထဝီအနေအထားတစ်ခုအတွင်းရောက်ရှိပါက Bluetooth သို့မဟုတ် NFC နည်းပညာသည်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအစပျိုးနိုင်သည့်နေရာကိုအတိအကျထောက်ပြနိုင်သည်။
Proximity Marketing သည်တန်ဖိုးကြီးသော Apps နှင့် Geocentric Technology ကိုအမြဲတမ်းမလိုအပ်ပါ
သငျသညျနည်းပညာအားလုံးကိုမပါဘဲ Proximity စျေးကွက်၏အားသာချက်ကိုယူချင်လျှင် ... သင်တတ်နိုင်သမျှ!
QR ကုဒ်များ - QR ကုဒ်ပါသည့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာတစ်ခုတွင်ဆိုင်းဘုတ်ကိုသင်ပြနိုင်သည်။ R ည့်သည်သည်သူတို့၏ဖုန်းကို အသုံးပြု၍ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်သောအခါ၎င်းတို့တည်နေရာကိုတိတိကျကျသိပြီးသက်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသတင်းပို့ရန်နှင့်သူတို့၏အပြုအမူများကိုလေ့လာနိုင်သည်။
ဝိုင်ဖိုင် Hotspot - အခမဲ့ wifi hotspot တစ်ခုကိုသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ သင်သည်လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် Starbucks သို့ပင်ဝင်ရောက်ဖူးပါကပြောင်းလဲနေသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာများကိုဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသူကိုတိုက်ရိုက်မြင်တွေ့သည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
မိုဘိုင်း Browser ထောက်လှမ်း - သင်၏တည်နေရာရှိ Mobile Browser ကိုအသုံးပြုသူများကိုရှာဖွေရန်သင်၏ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် geolocation ထည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက်သင့်အား Wifi ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေလူတစ် ဦး ချင်းကိုပစ်မှတ်ထားရန်တက်ကြွသောပါ ၀ င်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်တက်ကြွသောအကြောင်းအရာများကိုအသုံးချနိုင်သည်။ ဤအရာ၏တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာအသုံးပြုသူအား ဦး စွာခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းဖြစ်သည်။
ချေးငွေကိုရွေးချယ်ပါ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Proximity Marketing ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အနေဖြင့်ဤအချက်အလက်အချက်အလက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
Tags: Beaconဘလူးတုသ်ဘလူးတုသ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရွေးချယ်မှုချေးငွေများgeofencingမျှော်လင့်ခြင်းhotspot စျေးကွက်Hyper-Localizationအချစ်hyperlocal စျေးကွက်ရှာဖွေရေးibeaconအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိုဘိုင်း browsingလယ်ပြင်ဆက်သွယ်ရေးအနီးNFCနီးကပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနီးကပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းဇယားQR ကုဒ်များအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအသေးစားစီးပွားရေးSMEProximity Marketing ဆိုတာဘာလဲwifi ဟော့စပေါ့
တည်နေရာအခြေပြုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး - Geo-Fencing နှင့် Beacons
4:2016 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 30
Proximity အခြေပြု စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုဖြေရှင်းချက်၊ သင့်ဖောက်သည်များအား ထိုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်၊ ထူးခြားသောစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
19:2016 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 40 တွင်
ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကို စာရင်းပြုစုပေးတဲ့အတွက် ကောင်းတဲ့ဘလော့ပါ။ ဒီနေရာလေးမှာ သူတို့နှစ်ယောက် ဘယ်လိုကစားကြလဲ ဆိုတာကို သိချင်နေခဲ့တယ်။ ထိပ်တန်း Proximity စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ manfucaturers များစာရင်းကို ဘယ်မှာရှာရမလဲဆိုတာ သင်သိပါသလား။ Bluetooth နည်းပညာကို အထူးရှာနေပါတယ်။
မတ်လ 25, 2016 မှာ 3: 45 AM